Shiinuhu Waxtarlaawe Ayaa Lagu Sameeyaa Soo Saaraha Muraayada Muraayada (Muraayada Muraayadda iyo Soo-saaraha). Yifan
ASTAAMAHA Kaydinta, Khaanadaha, Muraayada LED
Maaddi MDF dhalaalaya oo sarreeya, Dahab dahab ah oo bir bir ah ka sameysan
QIIMEYNTA SHARCIGA 800mmL x 400mmW x 750mmH
Waxyaabaha loo yaqaan 'MDF' ayaa ka dhigaya dusha sare ee miiska labiska mid fudud oo nadiif ah. Miiska miiska oo lagu daray dahab adag ayaa u muuqda mid casri ah oo casri ah, oo ah qalab fudud oo xarrago leh, oo ku habboon qolka jiifkaaga. baarka taageerada iyo laba bar oo taagan oo hooseysa ayaa xoojin kara xasilloonida. Waa ikhtiyaar hadiyad weyn u ah gabadhaada Maalinta Jacaylka, Maalinta Hooyada iyo dhalashada.
Waxay ku dhameystireysaa muraayadda wareega wareega ah ee dusha sare si aad uhesho aragti ah milicsigaaga, waxayna kuu sahlaysaa markii aad sameysid.Kaloogu talagalay muraayadda taabashada shaashadda taabashada, lebisku wuxuu awood kuu siinayaa inaad qurxiyo xitaa iftiinka xun. Waxaa jira seddex nooc oo nalka dabiiciga ah, diirimaad iyo qabow aad adigu doorato. Iftiinka jilicsan ayaa si dhammaystiran ugu dari doona soo jiidashada unuggaaga oo waligaa ma dareemi doontid dhalaal. Maaddaama ay ka samaysan tahay maaddada darajada P2, waxaa jiri doona ur aan badnayn oo xannuunsan.
Waxyaabaha waxtarka leh ee lagu dhammeeyay dahab qurux badan, waxay si fiican ula socdaan dusha sare miiska qoryaha iyo maqaarka maqaarka. Lugaheeda jilicsan iyo khadadka nadiifka ah, miiska miiska casriga ah iyo kan casriga ah ayaa ah mid lagu qurxiyo qolka jiifka. Khaanad muhiim ah ayaa bixisa keyd waxtar leh halka muraayada wareega ay tahay meesha ugu fiican ee lagu hagaajin karo timahaaga iyo qurxinta.
Miiska labiska waxaa lagu dhejin karaa qolka fadhiga, qolka jiifka, ama meel kasta oo aad rabto, taas oo ku siin karta qurxinta alaabta guriga ugu qurxan gurigaaga.
QIIMEYNTA SHARCIGA ： 800mmL x 400mmW x 750mmH
STYLE: Naqshad & Naqshad Casri ah oo casri ah
MAADDADA: Caddaan + Dahab dahab ah Maaddooyinka: E1 guddi walxaha fasalka ah + Boodhadh bir bir dahaarka leh
Hore: Miiska Qurxinta lugaha Oak
Xiga: YF-T3 oo ay ka buuxdo miis dhar xidhasho oo casri ah
Shaxda Dharka Qadiimiga ah
Qabanqaabiyaha Miiska Dharka
Shaxda Dharka Iyadoo Lugaha Birta ahama
Jadwalka Dharka Rinjiga ee Piaono
Shaxda Dharka Cad
Miiska labiska casriga ah iyo casriga ah YF-T6
Saxanka hoos u dhaca ah ee loo yaqaan 'YF-T12' Drop-down saxaarad ayaa u furan dharka labiska
YF-T8 geeska ay ka buuxaan miiska labiska raaxada